FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA FOHY ALIKA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika fohy alika sy sary
Alika fohy mifangaro / Labrador retriever alika mifangaro
'Rocky dia Lab / GPS anglisy telo taona. 27 'no maina izy ary 80 lbs. Nanomboka niofana ho alika fitsaboana enim-bolana izy, na izany aza, nanomboka nahafantatra rehefa ho lavo aho. Nosoratana anarana ho alika fanompoana ahy izy avy eo. '
Labrador Retriever Alemana Shorthaired
Ny alika Shorthaired Lab dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Pointer Shorthaired Alemanina ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Labiazy fohy alemana
Designer Dogs Kennel Club = Labrador Retriever fohy alemana
Mpanoratra International Canine Registry®= Laboratoara fohy alemana
Alika mahay mandanjalanja tokoa i Odin. Manaraka ny olombelona sy ny alika hafa izy ... saingy matoky tena koa izy ... mandehandeha manara-maso zavatra tsy ara-dalàna izy. 75 lbs izy., Saingy maniry izy fa alika am-pofoana! Odin dia fitaovana lehibe tamin'ny asanay niaraka tamin'ny alika fialofana satria matoky tena izy ary sariaka. Alika fialofana dia entina any aminy avy hatrany. Nisy alika iray manokana izay natahotra ny zava-drehetra ary nihetsika tamin'ny herisetra .... Rehefa tonga tany an-trano aho ary nampahafantatra azy an'i Odin dia nanova tanteraka ny fomba fanaony. Nanaraka an'i Odin tamin'ny toerana rehetra izy ary tsy ela dia nianatra nitoky tamin'ny olona. Odin dia tena alika mahafinaritra. ' Jereo Odin miaraka amin'ny fonosana.
'Odin dia alika mifantoka be. Velona ho an'i Frisbee izy ... na baolina raha izany no misy. Nandray kilasy fanarahan-dia izy ary noporofoina fa voajanahary ary vao manomboka ny Dock Diving amin'ny alàlan'ny alika Splash, izay tiany fotsiny. Roa taona i Odin hatramin'ny volana septambra 2009. Alika famonjena sy alika mpiompy no alehanay ary alika mitaingina alika ho an'ny orinasa mipetraka any an-toerana, ka misy alika an-taonina maro foana amin'ny fiananay. '
'Ity i Odin, Labrador Shorthaired Alemanina, aseho eto toy ny alika kely 3 volana. Lehilahy mahafinaritra sy mahery izy. Efa lehibe izy izao, tiany ny manandrana sy mifampikasoka na dia 80-lb aza. lava. '
'Ity dia sarin'ny sokola Lab / Pointer Shorthair Alemana. Izy dia angovo avo, tena mahatoky, orona LEHIBE ho an'ny fihazana. Ny fampifanarahana dia toy ny volo fohy. Manana tongotra an-tranonkala izy, tia milomano, mitambatra palitao-manana onja kely ao aminy mandritra ny volana mangatsiaka kokoa. Angamba alika tsara indrindra nananako hatramin'izay. '
'Ity i Jock, laboratoara Shorthaired Alemanako 1 taona. Ny dadany dia Shorthair Pointer alemà maloto ary ny reniny dia sôkôla madio Labrador Retriever. Alika mahatalanjona izy ary mahafantatra tetika 20 mahery, miaraka amin'ny fiompiana omby. Alika mahatalanjona izy ary mieritreritra aho fa izy dia famaritana mahafinaritra momba ny fifangaroana tsara indrindra amin'ity karazany ity. Indraindray isika dia milaza hoe mandeha amin'ny steroid izy satria tena muscled ary tsy matavy aminy mihitsy (ny shorthair ao aminy). '
Jock the German Shorthaired Lab (Alemà Shorthaired Pointer / Labrador Retriever mix dog) amin'ny taona 1 amin'ny lanezy.
Jock the German Shorthaired Lab (Alemà Shorthaired Pointer / Labrador Retriever mix dog) amin'ny taona 1 miaraka amin'ny tompony sy ny soavaliny
Jock the German Shorthaired Lab (Alika Shorthaired Pointer / Labrador Retriever mix dog) amin'ny 1 taona
'Ity i Shaun, namako akaiky indrindra eto an-tany. Mamy, be fitiavana, manan-tsaina, mahay mandanjalanja. Maniry ny hisy mandrakizay. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labana Shorthaired Alemanina
Sary fohy momba ny laboratoara alemanina 1
Lisitry ny alika mifangaro mifangaro alika fohy
afangaro terry amina chihuahuas
dane mahafinaritra pyrenees be afangaro
mifangaro dachshund miaraka amin'i jack Russell
antsasaky ny frantsay antsasaky ny anglisy bulldog
dimy volana mpiandry ondry alemaina
shar pei lab mix puppy